ခရစ္စမတ်ကာလလေးမှာ ပရိသတ်တွေကိုအံ့သြသွားစေတဲ့ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ပုံဖော်ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ နေခြည်ဦး – သုတရသ
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ နေခြည်ဦးကတော့ အချိန်တိုအတွင်းမှာ အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာတဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း ပရိသတ်အသိအမှတ်ပြုခံရသူတစ်ယောက်ပါ။အခုဆိုရင်တော့ ဆောင်းတွင်းအေးအေးလေးနဲ့အတူ ခရစ္စမတ်ကာလကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ အမြဲဆန်းသစ်မှုတွေကိုဖန်တီးလေ့ရှိတဲ့ချီချီကတော့ “ဒီ Christmas မှာ chillies တွေအားလုံးကို
ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်တွေ သယ်လာပေးမှာကတော့ SANTA BABY CHI CHI ပါနော်။ အေးမြတဲ့ ဆောင်းတွင်းအငွေ့အသက်လေးလည်း ပေးချင်တယ်၊ Christmas အတွက်လည်း mystical creature လေးတစ်ကောင်လေးဖြစ်ချင်တယ်။ ထိမိရဲ့လား my chillies ??? I love you all soooo much and wishing youasweet December and Holly Jolly Christmas”
ဆိုပြီးတော့ ရေးသားကာအမိုက်စားပုံတွေကို မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ ချီချီကတော့ mystical creature လေးအဖြစ်ဆန်းပြားတဲ့ပုံစံလေးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး ကံကောင်းခြင်းတွေကိုသယ်လာတဲ့ Santa Baby ဆိုပြီးတော့လည်း ပြောထားပါသေးတယ်။ ချီချီရဲ့ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ပုံဖော်ဖန်တီးမှုတွေကတော့ ပရိသတ်တွေကို ခရစ္စမတ်မှာကောင်းမွန်တဲ့ခံစားချက်အသစ်တွေကို ရရှိစေမှာအမှန်ပါပဲနော်…
ခဈြပရိသတျကွီးရေ နခွေညျဦးကတော့ အခြိနျတိုအတှငျးမှာ အောငျမွငျမှုတှရေရှိလာတဲ့ ဘလော့ဂါတဈယောကျလညျးဖွဈသလို သရုပျဆောငျတဈယောကျအနနေဲ့လညျး ပရိသတျအသိအမှတျပွုခံရသူတဈယောကျပါ။အခုဆိုရငျတော့ ဆောငျးတှငျးအေးအေးလေးနဲ့အတူ ခရစ်စမတျကာလကိုရောကျရှိလာပါပွီ။ အမွဲဆနျးသဈမှုတှကေိုဖနျတီးလရှေိ့တဲ့ခြီခြီကတော့ “ဒီ Christmas မှာ chillies တှအေားလုံးကို ကံကောငျးခွငျးလကျဆောငျတှေ သယျလာပေးမှာကတော့
SANTA BABY CHI CHI ပါနျော။ အေးမွတဲ့ ဆောငျးတှငျးအငှအေ့သကျလေးလညျး ပေးခငျြတယျ၊ Christmas အတှကျလညျး mystical creature လေးတဈကောငျလေးဖွဈခငျြတယျ။ ထိမိရဲ့လား my chillies ??? I love you all soooo much and wishing youasweet December and Holly Jolly Christmas” ဆိုပွီးတော့ ရေးသားကာအမိုကျစားပုံတှကေို မြှဝလောခဲ့ပါတယျ။